अमेरिकालाई कडा चेतावनी दिदैँ इरानका सर्वोच्व नेताले जारी गरे यस्तो बयान – Sanchar Patrika
काठमाडौं । इरान आफ्नो राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्षम रहेको विगतको इराकसँगको यु–द्धले पुष्टि गरिसकेको इरानले बताएको छ । आफ्नो राष्ट्रको रक्षा गर्न र नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्षम रहेकोसर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनीले सोमबार बताउनुभएको छ । उहाँले सन् १९८० देखि १९८८ सम्म इराकसँग एक्लै लडेर आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गरेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आठ वर्ष ‘उनीहरू’ले सकेजति सबै कोशिस गरे अझै केही पनि हासिल गर्न सकेनन् । के इरानको लागि यो ठूलो विजय हो ?” इरान–इराक यु–द्धको वर्षगाँठ मनाउन ‘होली डिफेन्स’ हप्ताको सुरूमा देशभरका शीर्ष सैन्य कमाण्डरहरू र यु–द्धका दिग्गजहरूलाई टेलिभिजनद्वारा गरिएको भिडियो सन्देशमा खामेनीको यी भनाइ आएका हुन् ।
“‘होली डिफेन्स’ले इरानप्रति आक्रामक हुनु धेरै महँगो हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । “जब कुनै राष्ट्रले आफ्नो रक्षा गर्ने शक्ति र दृढ सङ्कल्प देखाउँछ, यसले आ–क्रम–णकारीलाई आ–क्रम–ण गर्नु अघि दुई पटक सोच्न बाध्य पार्छ,” खामेनीले भन्नुभयो । इरान विरुद्ध अमेरिकाले एकलरूपमा नाकाबन्दीको घोषणा गरेको दावी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यदि कोही बुद्धिमानीपूर्वक कार्य गर्न चाहन्छ भने उसको इरानसँगको यु–द्ध आफ्नो फाइदाको लागि हुनेछैन । यो धेरै खर्चिलो भएको महसुस हुनेछ ।”
इराकी शासक सद्दाम हुसेनले इरानमा इस्लामिक क्रान्तिको डेढ वर्षपछि आ–क्रम–ण गरेको स्मरण गर्दै उक्त यु–द्ध पनि इराक एक्लैले नलडेको दावी इरानी सर्वोच्च नेता खामेनीले दावी गर्नुभयो । इरान–इराक यु–द्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय यु–द्धविरामबाट अन्त्य भएको थियो । खमानीले उक्त द्वन्द्वले इरानको क्रान्तिलाई पहिलेभन्दा ‘धेरै बलियो’ बनाएको समेत दावी गर्नुभयो । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका सन् २०१९ पछि दुई प्रत्यक्ष भिडन्तको नजिक पुगेर पनि संगठित यु–द्ध भने टरेको छ ।
Prevपशुपतिमा ला$स जलाउने बाउछोरीले गरे २८५ जनाको एकैचोटी श्राद्ध ! रोकिएन कसैको आँसु, एकासी के भयो ? (हेर्नुहोस भिडियो)
Nextभखरै बिहे गरेकी नब विबाहित श्रीमतीले २५ लाख सम्पत्ति लिएर प्रेमीसँग फरार (प्रेमीले दिएको धम्कीको म्यासेजसहित)
“म मृ’त्युको मुखबाट आएको हुँ, कोभि’डसँग खेल’बाड नग’रौं” : डा. कार्की
भोलि साउन १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय, सवारी साधन पूर्णरुपमा बन्द (2620)
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने ! (2363)